Waa Kuma Shaqsiga Stevan Gerard Ku Dhiiri Geliyay In Uu Noqdi Macalin Arimo Badana Ka Hadlay.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWaa kuma shaqsiga Stevan Gerard ku dhiiri geliyay in uu noqdi macalin arimo badana ka hadlay.
Steve Gerrard wuxuu wali xasuustaa taladii uu ka helay Jurgen Klopp ka hor inta uusan noqon macalinka Rangers sanadkii 2018 Waxay ahayd seddex sano tan iyo markii Gerrard uu la wareegay Ibrox wuxuuna calaamad u noqon doonaa qaab ciyaareedkaas markii Rangers kor u qaaday koobka Premiership markii ugu horeysay muddo toban sano ah.
Laakiin 40-jirkan si weyn looma qaadi doono isagoo uga mahadcelinaya wada sheekeysiga Klopp inta uu weli ku sugan yahay Liverpool Gerrard wuxuu u sheegay Sky Sports: Waxaan xasuustaa inaan wadahadal la yeeshay Jurgen oo ku saabsan maamulka ka hor intaanan xitaa qaadan doorkan – ‘waa maxay waxyaabaha muhiimka ah ee aad ii sheegi karto?
Maxaan kaa qaadi karaa oo iga caawin doona inaan hore u socdo?’ Wuxuu had iyo jeer oran jiray iskuday oo isku dheelitirnaan intii aad karto. Hadda waan ogahay sababta uu sidaas u yidhi Sababtoo ah safarkani wuxuu kugu qaadayaa meesha oo dhan – dareeno cajiib ah, laakiin sidoo kale aniga ayaa hoos ii dhigay.
Gerrard wuxuu qorsheynayaa inuu fadhiisto oo uu falanqeeyo xilli ciyaareedka dhowr toddobaad gudahood laakiin wuxuu leeyahay fikradaha ayaa si dhaqso leh ugu weecin doona ololaha xiga “Aad ayaan ugu faani doonaa wixii aan ku guuleysanay, dib ayaan u bilaabi doonaa naftayda waxaanan sameyn doonaa wax kasta oo aan u baahanahay inaan ku sameeyo asalka si aan isugu dayo oo aan uga dhigo kooxdan mid xoog badan oo tartan ah intii aan kari karo.” ayuu yidhi.
Waxaan ahay qof himilo leh sida qof kasta oo ku xiran naadigan. Waxaan rabaa inaan isku dayo oo aan helo kooxdan kubbadda cagta Champions League iyo inaan difaacno horyaalkeenna nolosheena, waxaanan doonayaa inaan koobka wax sax ah ka dhigo maadaama aysan si fiican ila fadhiyin.
Waxaan rabaa inaan ku soo laabto xilli-ciyaareedkii hore anigoo leh fursad cadaalad ah oo lagu guuleysto, taasi waa waxa aan codsado oo dhan. Waxaan rajeyneynaa, in guddiga ay igu taageeri doonaan taas oo aan dib u laaban doono Gerrard wuxuu ogaa inuu qabanayo shaqo weyn markii uu ogolaaday inuu noqdo macalinka Rangers bishii May 2018.
laakiin kaliya markii uu lahadlay dadka kooxda waxa uu ogaaday in lasiiyay fursad cajiib ah “Waan ogaa inay weyn tahay laakiin adigu naftaada wax sii baro” ayuu yidhi. Waxaad dhagaysanaysaa ciyaartoy hore, taageerayaal, dad ka soo shaqeeyey goobta tababarka iyo Ibrox sanado badan, waxaadna helaysaa waxbarasho badan marka loo eego cabirka iyo weynaanta.
Had iyo jeer waan ogaa inay ahayd hay’ad laakiin markii aad aado ciyaaraha Yurub oo aad ku lug yeelato Old Firms, oo aad adigu naftaada u soo qaadayso, kooxdani runtii way iga fogeysay marka loo eego cabirka iyo dhererka.